Nahoana ianao no mila miverina amin'ny loharano miverimberina fotsiny?
Ny fananganana rohy dia ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny fikarohana karazana fikarohana satria mahatonga ny loharanon'ny tranonkala hita amin'ny SERP. Nandritra ny taona faramparany dia niova tanteraka ny fomba fifandraisana amin'ny rohy. Na izany aza, ny lanjan'ny fananganana rohy dia tsy azo ovaina. Ity ampahany amin'ny fanatontosana pejy tsy afaka manadino anao.
Ny fanovana fototra izay hita ao amin'ny fananganana rohy dia ny tokony hampifantohantsika amin'izao fotoana izao ny fanamafisana ny kalitao amin'ny loharanom-pahefana fa tsy hampitombo ny isany. Ireo solontenan'ny Google dia milaza fa ny rohy ambany tsy misy lanjany izay azon'izy ireo amin'ny alàlan'ny hosoka dia mety handratra ny habaka aterineto ary hampidina ny fahefan'ny faritra.
Noho izany ny tonga lafatra mba hitadiavana ny rohy kalitao dia miankina amin'ny sehatra manan-kaja. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny loharanom-pahefana azontsika miankina aminy sy ny fomba ahafahana mahazo rohy avy amin'izy ireo.
Inona avy ny tranonkala azo raisina ho tompon'andraikitra?
Loharanom-baovao tomponandraikitra iray dia manana pejy PageRank avo, manome ny votoatin'ny kalitao sy ny traikefan'ny mpampiasa. Ny loharanon-tranonkala toy izany dia manana fahamendrehana ary misy fiantraikany amin'ny indostria. Raha ny fitsipika, dia niorina tao amin'ny TOP ny valin'ny fikarohana ary mifandray amin'ny votoatin-javatra mifototra amin'ny fikarohana izay voakasik'ireo mpampiasa azy no mahita fa sarobidy ho azy ireo. Ity votoatim-pahalalàna ity dia manangana hetsika ara-piaraha-monina manodidina azy izay mahazatra ihany koa ho an'ny loharanom-pahefana.
Ahoana ny fomba ahitanao tranonkala mpamorona ho an'ny backlinks?
Misy teknika roa fototra ahitanao loharanon-tranonkala manerantany - manomboka na mandeha mivantana.
Ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra ahitanao loharanom-baovao azo an-tserasera dia ny fanaovana fikarohana Google. Manomboha amin'ny fampiasana teny fikarohana izay mifandraika amin'ny tranokalanao. Rehefa manao ny fikarohana ianao, dia azonao ampiasaina ireto fisarahana manaraka ireto - fanitarana tranonkala (edu. , gov. , org. ); keyword (amin'ny fomba toy izany dia hivezivezy fotsiny ianao amin'ny valiny izay manana fikarohana karazana ao amin'ny lohateny); "Keyword" (fehezanteny) - tokony hipoitra araka ny voasoratra ny teny.
Ankoatra izany, azonao atao ny mametraka ny fomba fiteny izay mifandray amin'ny fananganana rafitra fifandraisana. Ohatra, ny rohy, ny loharano ao amin'ny tranonkala, ny lisitry ny rohy, ny lisitry ny tranokala sy ny sisa.
Azonao atao ny manatsotra ny fomba ahazoana tranonkala manerantany amin'ny fampiasana fitaovana amin'ny aterineto toy ny Semalt Auto SEO na Moz SEO Toolbar. Ity fitaovana an-tserasera ity dia mety mijery ny filazana rehetra momba ny teny fanalahidy izay ampidirinao. Azonao atao ny mampiasa filtre fanampiny mba hahazoana fampahalalana marim-pototra miaraka amin'ny lisitry ny loharanom-baovao azo antoka sy manan-danja izay ahafahanao mametraka ny rohy.
Ny fomba iray hafa dia ny mifandray amin'ny tompony tomponandraikitra tomponandraikitra. Raha vao nahita vohikala iray izay mifanaraka amin'ny fepetra takiana aminao ianao, dia tokony hiezaka hifandray amin'ny tompony amin'ny alàlan'ny mailaka, telefaona na amin'ny hafa. Ny fotoana tena manan-danja dia ny mandefa hafatra manokana. Manomeza fampahalalana amin'ny fomba toy izany izay azon'ny tompona ho sarobidy aminy. Ny feon'ny hafatrareo dia tokony ho eo anelanelan'ny matihanina sy ny olona manokana mba hiditra amin'ny tompony ary hanorina fifandraisana tsara eo amin'ny raharaham-barotra Source .